Lahatsoratra momba ny Mohsin Ali Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mohsin ali
Mohsin dia mpanoro hevitra sy mpampianatra am-po. Efa folo taona no niasany tao amin'ny indostria, nanampy ny olona hanatratra ny tanjony amin'ny alàlan'ny marketing dizitaly. Tsy momba ny fahazoana fifamoivoizana bebe kokoa na fiovam-po fotsiny izany - ny fanaovana antoka fa afaka mampita ny hafatrao amin'ny fomba mahomby ianao mba hahafahan'ny mpihaino anao hahatakatra izay ilainao hataony!
Alarobia, Febroary 2, 2022 Alarobia, Febroary 2, 2022 Mohsin ali
Ny marketing votoaty no fomba mitombo haingana indrindra sy mahomby indrindra amin'ny fivarotana ny orinasanao, saingy mety ho sarotra ny mamorona paikady mandresy. Ny ankamaroan'ny mpivarotra votoaty dia sahirana amin'ny paikadiny satria tsy manana dingana mazava amin'ny famoronana azy izy ireo. Mandany fotoana amin’ny tetika tsy mandaitra izy ireo fa tsy mifantoka amin’ny paikady mahomby. Ity torolàlana ity dia manoritra dingana 5 ilainao hamoronana ny paikadin'ny varotra votoaty mandresy anao mba hahafahanao mampitombo ny orinasanao